Gefen သည်အသံလွှင့်ခြင်းစတူဒီယိုနှင့်ဆက်သွယ်သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2015 NAB ပြရန် » Gefen connection အသံလွှင့် Beat စတူဒီယို
ငါ Studios က Beat အသံလွှင့်မှာငါ့အကွန်ယက်ကိုကျော်ဘယ်နေရာမှာမဆိုဗွီဒီယိုကိုရယူထိန်းချုပ်နိုင်မယ့်စနစ်တစ်ခုထည့်သွင်းစဉ်းစားတဲ့အခါ, Gefen အလုပ်အဘို့အဦးဆုံးသောသူ, ဗွေဆော်ကုမ္ပဏီဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါစတူဒီယိုဘို့စိတျထဲတှငျခဲ့ပေါင်းစပ် switching အဆိုပါဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် matrix ကိုအဘို့, ငါအတူတူငါ့အကွန်ယက်ကိုကြိုးနဲ့တုတ်နှင့်ငါ့ကွန်ရက်ကအခြေခံအဆောက်အဦများတစ်လျှောက်တွင်အရာခပ်သိမ်းကိုရယူနိုင်တော့မည်နိုင်တော့မည်ချင်တယ်။
ဘေးဖယ် Gefen ကိုလည်းပေးနိုင်စွမ်းသောအထူးပြု cabling ကနေကျွန်မရဲ့စတူဒီယိုရည်ရွယ်ချက်များအတွက် IP ကို ​​device ကိုကျော်သူတို့ရဲ့ DVI KVM သုံးစွဲဖို့ချင်တယ်။ 1 VGA အချက်အချာနှင့်တစ်ဦး 4: တစ် 1 ပေါင်းစပ်4DVI splitter ငါမစိုက်ငါ၏အဝိုင်းပတ်လမ်းကြောင်းဖြည့်စွက်ပေးနိုင်ခဲ့နောက်ဆုံးမှာငါ့အ network ပေါ်မှာရှိသမျှသော device များထိန်းချုပ်ခဲ့ရသည်။ ထို့အပြင်တစ်ဦးထစ်ခြင်းမရှိဘဲအပြီးသတ် VGA converter ကိုတပ်ဆင်ဖို့ DVI ။ အဘယ်သူမျှမကိစ္စငါပွေးလေ၏ဘယ်လောက် cabling ကြောင့်နောက်ဆုံးမှာသူကအလုပ်မလုပ်ဖွဲ့သော Gefen ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
အပေါင်းတို့သည်မိမိတို့ထုတ်ကုန်တစ်သက်တာထောက်ခံမှုများပါဝင်သည်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ Gefen ကို ရွေးချယ်. နောက်ထပ်အကြောင်းရင်း။ ၎င်းတို့၏နည်းပညာဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အင်ဂျင်နီယာများငါကို set up ငါ၏အမှုစနစ်အတွက်ဖြစ်စေလိုပေမည်ဆို installation သို့မဟုတ်ပြောင်းလဲမှုနှင့် ပတ်သက်. တိုင်ပင်ဆွေးနွေးဖို့ရရှိနိုင်ပါသည်။ တကယ်တော့အတွက် GefenPro လိုင်းငါ့ကိုထိုကဲ့သို့သောငါလိုချင် Configuration နဲ့ 24 /7နည်းပညာပံ့ပိုးမှုများအတွက်ဘက်စုံအဖြစ်အများအပြားထူးခြားသော features တွေခွင့်ပြု - မယ့်အစားတစ်ဦးအထူးသဖြင့်ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံ troubleshoot သို့မဟုတ်ဖန်တီးဖို့ဖြစ်စေနာရီအပေါ်သို့နာရီဖြုန်းဖို့ရှိခြင်း၏အဖြေတစ်ခုလိုအပ်မယ့်အတိအကျဘာ။
အသံလွှင့်မှာစတူဒီယို Beat, ငါတို့အံ့သြလောက်အောင်အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ကြသည် - နှင့် Gefen ကအားလုံးကိုဖြစ်ပျက်စေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ teleprompters Gefen မှတဆင့်ချိတ်ဆက်နေကြသည်။ အဆိုပါ Teleprompter server ကိုတစ်ဦး DVI output ကိုနိုင်အောင်ကျနော်တဦးတည်းကို output ထို့နောက် VGA ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ VGA converter (/ 1 VGA အတွက် 1 DVI ထွက်), သွားအတူ, တစ်ဦး DVI splitter မှတဆင့်ုင်သည် Teleprompter ဆာဗာ၏ output ကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်ထားပါတယ် ငါ VGA port ကိုတဆင့်အမှန်တကယ် teleprompters ချိတ်ဆက်င့်ဘယ်မှာ splitter ။ ဤရွေ့ကား teleprompters ကျွန်တော်တို့ရဲ့ soundstage ပေါ်တွင်တည်ရှိပြီး, ထိုသို့တစ်ဦးကျက်သရေနဲ့တူအလုပ်လုပ်တယ်နေကြသည်။
ဤသူသည်ငါတကယ်ကချိတ်ဆက်င့်ကိုဘယ်လိုဖြစ်ပြီး: အ Teleprompter server ကို DVI ထံမှထွက်ခြင်း, splitter အတွက် DVI port ကို; ပထမဦးဆုံး splitter output ကိုထိန်းချုပ်မှုအခန်းဝင်, ဒုတိယ DVI ထဲက soundstage သွား - တဦးတည်း VGA output ကိုတဦးတည်း Teleprompter သွားနှင့်အခြား VGA output ကိုဒုတိယ Teleprompter သွားအတူ - ပု DVI input ကို VGA မှပြောင်းပေးသော VGA converter ကိုစဝင် ။ နောက်ထပ် DVI splitter ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချိတ်ဆက် Vizrt ကျွန်တော်တို့ရဲ့ server ကိုအခန်းတစ်ခန်းထဲမှာ Plura မော်နီတာမှအထွက်နှင့်အတူထိန်းချုပ်မှုခန်းထဲမှာ Engine ကို။ အဆိုပါ Gefen ထုတ်ကုန်ငါ့ကိုအလွယ်တကူအစဉ်အဆက်ငါယခုအချိန်တွင်မလိုအပ်ရိုက်ထည့်ထားတဲ့ရန်အချက်ပြပြောင်းခွင့်ပြုပါ။ ဒါကပဲမဟုတ်ရင်, ဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
ဘေးဖယ်တကယ် signal ကိုပျက်စီးခြင်းဖျက်သိမ်းရေးအတွက်ကူညီပေးသည်သော Gefen ထုတ်ကုန်များကြမ်းတမ်းဆောက်လုပ်ရေး, ငါသည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်သောအာဏာကိုထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများအဖြစ်သုံးပြီးတယ်သောသေတ္တာများတစ်ဦးချင်းစီကနေ။ Unpowered converters အဖြစ်နှင့် splitters ရုံတူညီတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မပေးနိုငျသညျ။
ဒါဝေးကို၎င်း, ကိရိယာများအကြောင်းပြောဆိုသော - သာကေဘယ်လ်ကြိုးဖော်ပြခဲ့တဲ့; Gefen ဖော်ပြချက်ကျော်လွန်ဖြစ်ကြောင်းပရီမီယံ High-end ကြိုးတွေထုတ်လုပ်တယ်။ ဟုပြီးနောက်, တကယ့်အကြှနျုပျကိုတိကျစွာသူတို့ရဲ့အရည်အသွေးကိုဖော်ကျူးလိမ့်မည်ဟုတစ်လမ်းအတွက်သူတို့ကိုဖော်ပြရန်ရန်အဘို့အခက်ခဲဖြစ်သွားမယ့် - ပေမယ့်ကျွန်မရဲ့အကောင်းဆုံးလုပ်ဖို့သွားမယ်။
Gefen ရဲ့မြန်နှုန်းမြင့် HDMI Ethernet, Mono အဘိဓါန်-LOK နှင့်အတူကေဘယ်လ်ကြိုးအလွန်အမင်း superbly တပ်ဆင်တောင်းဆိုနေတာကိုကိုင်တွယ်။ HDTV ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2K နှင့်အတူ, 4K 4096 x 2160 မှတက်ကြထုတ်လုပ်သောစမ်းသပ်ပြီးနှင့်အထိအသိအမှတ်ပြုနေကြတယ်, ထောက်ခံ HDMI အရည်အသွေးမြင့် 2AWG ကြေးနီကာကွယ်နှင့်လျှပ်စစ်သံလိုက််ရောက်စွက်ဖက် (EMI) ကနေ signal ကိုကာကွယ်ပေးသည်ကြောင်း Multi-layer ကိုဒိုင်းကာနှင့်အတူ category 340 (28 MHz) ။ ပရီမီယံ။ အတိအကျ။
cabling add-တက်နိုင်ပါတယ်လျင်မြန်စွာ။ သင်ဒီ cable ကိုပြေးလိုအပ်ပါတယ်နှင့်ကေဘယ်လ်သည်ပြေးသဘောပေါက်မှီကရှည်လျားလွန်းယူမထားဘူး -, ငါ့ကြိုးတွေအတော်လေးတိုတောင်းပြေးသော်လည်းအများစုမှာ Gefen ကြိုးတွေများသောအားဖြင့်ခြေရာပေါင်းများစွာကိုကိုင်တွယ်နှင့် signal ကိုသမာဓိစောငျ့ထိနျးနိုငျသညျ။ ငါ (10) မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းများ HDMI 25ft (MM), (10) မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းမှာသော့ခတ်ကြေးနန်း HDMI 6ft (MM), (5) မှာကေဘယ်လ်ကြိုး (Non-သော့ခတ်) HDMI 50ft (MM) မှာကြေးနီကြေးနန်း, (2) စူပါ Booster ကြေးနန်းများအတွက် HDMI 75ft မှာ 10ft မှာ, (40) DVI-D ကိုကြေးနီကြေးနန်းဌာန '(MM), 6ft မှာ (6) DVI-I ကြေးနီကြေးနန်းဌာန' (MM) နှင့် (5) HDMI DVI သော့ Adapter ကိုကြေးနန်းရန်။
ဘေးဖယ်သူတို့ရဲ့စိတ်ကူးဖောက်သည်ထောက်ခံမှုကနေ, ကသူတို့ရဲ့ website သို့ထူးခြားသောပါ! ဒါဟာအလွန်သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ကဲ့သို့ချောမွေ့ပြောင်လက်နှင့််ဖြစ်၏ ဒါကြောင့်လည်းသွားလာရန်လွယ်ကူသောင်နှင့်လက်ျာထုတ်ကုန်ရှာဖွေတာလျှပ်တပြက်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးလျှော့စျေးနှုန်းမှာလက်ရှိပစ္စည်းများကို featuring အနေနဲ့ "စက်ရုံပြင်ပ" စာမျက်နှာပင်ရှိပါသည်! အဆိုပါထုတ်ကုန်ရုပ်ပုံများကိုပြတ်သားဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သင်အမှန်တကယ်ပေးအပ်မတူညီသောပစ္စည်းများအတွက်ဒဏ်ငွေလက်ရာလက်တွေ့နိုင်ပါသည်။ သင်တစ်ဦးအစွန်အဖျားဒါမှမဟုတ်ကုန်သွယ်ရေးနှစ်ခုကောက်စေခြင်းငှါ, နေရာ - တစ်ဦး "downloads," ဧရိယာ, သီးခြား "လက်စွဲ" ဧရိယာနှင့်ပင်ဖိုရမ်ရှိပါတယ်။
ထိုသူတို့ကလည်း 4K အဘို့အဆင်သင့်ပါပဲ, Gefen 4K တစ်ခုကျယ်ပြန့်ရွေးချယ်ရေးရှိပါတယ် က Ultra HD အင်ဂျင်နီယာများတည်းဟူသော hungriest ကျေနပ်လိမ့်မည်ဟု (UHDTV) ပစ္စည်းကိရိယာများ! 3840 ၏နိမ့်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်တွေ 2160 x နှင့်အတူ, အကြီးစားနှင့်အသေးစားနှစ်ဦးစလုံး display တွေတိုးမြှင့ရုပ်ပုံချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်မှအကျိုး။ Gefen ၏ထုတ်ကုန်အားလုံး Plug ဖြစ်ကြပြီး (PnP) သဟဇာတ Play, ဒါ installation ကိုအစာရှောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Gefen ကုန်ပစ္စည်းများ features တွေတင်ဆောင်ကြသည်! ခြုံငုံ A / V ကိုစနစ်ကအမူအကျင့်များနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်ကောင်းမွန်မသာဖြစ်သော FST ( "Fast Switching Technology မှ") ကကွန်ယက်၏ကြွင်းသောအရာနှောင့်ယှက်ခြင်းမရှိဘဲအမြန် Connect နှင့်ဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်ခြင်းနှင့် display ကိုပါဝါ ups နှင့်အာဏာ Down ခွင့်ပြုရှိပါတယ်; (အသံနှင့်ဗီဒီယိုပြသမှုရဲ့နောက်မျိုးဆက်များအတွက်ပြင်ဆင်မှုအတွက်) 3D ထောက်ခံမှု; သင့်ရဲ့ Gefen devices များရဲ့ IP (Telnet ကိုနှင့် UDP ကို) နှင့်သည် RS-232 ကျော်ထိန်းချုပ်ခံရဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့ Web ကိုဆာဗာ Interface ကို, Gefen ထုတ်ကုန်နည်းပညာဆိုင်ရာအစွန်းပေးခြင်းနှင့်အခြားသောအဆင့်မြင့် functions များ, ။
Gefen ရဲ့သုံးသော့ချက်ထုတ်ကုန်လိုင်းများပါဝင်သည်: သူတို့ရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ်စီးရီးသည်၎င်း၏ပထမဆုံး software ကိုဟာ့ဒ်ဝဲထုတ်ကုန်ပါဝင်သည်ဟု HD ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ်ဖန်ဆင်းရှင် - အချိန်ဇယားဆွဲ, ပြန်ဖွင့်ခြင်း, စောင့်ကြည့်နှင့်ဗီဒီယိုမြို့ရိုးကိုဖြေရှင်းချက်များအတွက်ပြည့်စုံသောစနစ်အား; စုစုပေါင်းစနစ်ကပေါင်းစည်းမှုများအတွက်အသံ / ဗီဒီယို splitters, switches များ, Extender တွေ, converters အဖြစ်နှင့် matrix ကို Switcher တစ်ဦးကိုရွေးချယ်ဌန်ပါဝင်သည်သော Gefen Toolbox လိုင်း, နှင့် Gefen ProLine - ပိုပြီးကျယ်ပြန့်ဟာ့ဒ်ဝဲ features နဲ့တောင်မှ fiber-optic စွမ်းရည်နှင့်တကွ, ထုတ်လွှင့်ခြင်း, ငှားရမ်းခြင်း / ဇာတ်စင်နှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ကိုက်ညီ။
ဗီဒီယိုကိုပြောင်းလဲခြင်းနှင့် AV စနစ် signal ကိုဖြန့်ဖြူးအတွက်အထူးပြုတဲ့ကမ္ဘာ့အဆင့်မီဖြေရှင်းချက်ပေးသူ၎င်း၏စီးပွားဖြစ်CORIO®ဗီဒီယိုအားပြောင်းလဲခြင်းအပေါ်အခြေခံပြီး - tvONE: Gefen အဆိုပါ Nortek ကုမ္ပဏီ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်ကတည်းကသင်သည် Gefen ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာ, သငျသညျကဲ့သို့သောအခြားအ Nortek အမှတ်တံဆိပ်မှအသုံးပြုခွင့်ရှိသည် နည်းပညာ; ပန်းခရမ်း - ထိုဂီယာအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်း-အသိအမှတ်ပြုခေါင်းဆောင် switching နှင့်အမျှင်ကြောင်-X ကို cabling ကျော် Multi-format နဲ့ဗီဒီယို, အသံဖိုင်တွေနဲ့အရန်အချက်ပြ၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြန့်ဖြူးလျက်, သူတို့ကမ္ဘာကြီးကိုမြင်ကွင်းစုံ, Infinea, မွန်ဒိုနှင့်အသစ် Voyager စီးရီးထုတ်ကုန်ကြီးမှူးမတ်; ကြောကျ - ATON®, BlueBOLT®, ELAN®, Furman®, Niles®, Panamax®, Proficient®ပါဝင်သောတစ်ခုတည်းသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းယူနစ်သို့တစ်ဆယ်အထင်ကရအသံ, ပါဝါစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအမှတ်တံဆိပ်များ၏ထုတ်ကုန်နှင့်စျေးကွက်အားသာချက်ပေါင်းစပ်တဲ့ဓိကအမှတ်တံဆိပ်အုပ်စုတစ်စု , SpeakerCraft®, Sunfire®နှင့်Xantech®အမှတ်တံဆိပ်, Audio / Video စနစ်များမြေတပြင်လုံးအိမျဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ပေါင်းစည်းမှုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှရှုထောင့်အဘို့အ Device ရဲ့ပြည့်စုံခင်းကျင်းပေး; SpeakerCraft SpeakerCraft ဗိသုကာအသံချဲ့စက်နှင့်အီလက်ထရွန်းနစ်တစ်ခုနိုင်ငံတကာကအသိအမှတ်ပြုအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပါတယ်; Panamax & အီလက်ထရောနစ်နှင့်လျှပ်စစ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, filtration နှင့်ထိန်းချုပ်မှုထုတ်ကုန်များ၏တိုင်းပြည်ရဲ့ Pre-ထင်ပေါ်ကျော်ကြားဒီဇိုင်နာနှင့်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်တော်မူ၏ နှင့်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခဲ့သည့်အပေါ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသံနှင့်ဗီဒီယို signal ကိုပရိုဆက်ဆာအပါအဝင်အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များ, သူတို့ကအကောင်းဆုံးဟုလူသိများသည့်များအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချ AC ပါဝါအေးစက်နှင့်ဖြန့်ဖြူးထုတ်ကုန်များနှင့်အသုံးချသောဆန်းသစ်စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းနည်းများကိုထုတ်လုပ်ထားပြီး Furman, အရာ သူတို့ရဲ့တော်လှန်ရေးBlueBOLT® cloud-based ပလက်ဖောင်း။
Gefen စီးပွားရေးနှင့် prosumer application များအတွက်ဆန်းသစ်အသံ, ဗီဒီယိုနှင့်ကွန်ပျူတာ signal ကိုအပြောင်းအလဲနဲ့ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဦးဆောင်ပေးသူဖြစ်ပါတယ်။ လက်တွေ့ကျတဲ့ဆန်းသစ်တီထွင်မှုတစ်ခုအမွေအနှစ်နှင့်အတူ, Gefen လျှင်မြန်စွာတိုးတက်နည်းပညာနှင့်အစစ်အမှန်ကမ္ဘာ applications များအကြားကွာဟချက်ကိုပေါင်းကူးကြောင်းအလိုလိုသိဆက်သွယ်မှုထုတ်ကုန်များနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများပေးပါသည်။ Gefen ဆက်သွယ်မှုနဲ့ signal ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုချောမွေ့စွာအောင်နေဖြင့် system ကိုစွမ်းဆောင်ရည် elevates ။ မှာသူတို့ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု: www.gefen.com/index.jsp
Nortek * အဘယ်သူ၏အများအပြားစျေးကွက်-ဦးဆောင်အမှတ်တံဆိပ်ကျယ်ပြန့်စွမ်းရည်နှင့်အိမ်တွင်နှင့်အလုပ်မှာလူနေမှုပုံစံစတဲ့တိုးတက်မှုများအတွက်ဆန်းသစ်, နည်းပညာ-မောင်းနှင်ထုတ်ကုန်များနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများ၏ကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်းကယ်နှုတ်တော်မူကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ, ပိုမိုစုံလင်လာကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဟာယယဇ်ပူဇော်၏ကုမ္ပဏီရဲ့ကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်း, ဒစ်ဂျစ်တယ် display ကိုဖြေရှင်းချက် mounting, ထိုကဲ့သို့သောအကွာအဝေးကိုတစုံတရာနှင့်ရေချိုးခန်းပရိသတ်တွေ, အပူနှင့်အအေးထုတ်ကုန်များနှင့်လေကြောင်းစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များအဖြစ်လေဝင်လေထွက်ထုတ်ကုန်အသံဗီဒီယိုနှင့်လုံခြုံရေးဖြေရှင်းနည်းများပါဝင်သည်။
ဤနေရာတွင်အသုံးပြုသောအမျှဆက်စပ်မဟုတ်ရင်ညွှန်ပြမဟုတ်လျှင် * ဟူသောဝေါဟာရကို "Nortek" အတူတူက၎င်း၏လုပ်ငန်းခွဲများနှင့်အတူ, Nortek, Inc ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဤဝေါဟာရကိုသာအဆင်ပြေအသုံးပြုသည်နှင့်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ရေးရာစီမံခန့်ခွဲတစ်ဦးချင်းစီ၏သီးခြားကော်ပိုရေးရှင်းမဆိုတစ်ဦးတိကျတဲ့ဖော်ပြချက်အဖြစ်ရည်ရွယ်ခြင်းမရှိပါ။
4K ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2015-03-30
ယခင်: Bitcentral Integrated ဓိက: NetApp Software များနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်အတူသတင်း
နောက်တစ်ခု: NAB မှာ Cantemo Portal ကို 2.1 ၏ Sneak ကို Preview